Sidee Ku Noqon Kartaa Ku Dhaqangelinta Pro - ITS Tech
Sidee loo noqon karaa Pro Virtualization Pro
Noqo Pro Virtualization Pro
1. Bilow bilowga.
2. Billow yar.
3. Xulo Platform iyo Mastarin.
4. U qaado Qaybta soo socota.
Ganacsi dhejinta ah ayaa si dhakhso ah u kobcaya waqti kasta oo kale xasuusta dhawaanta. Iyada oo taasi si joogta ah u socodsiinayso, waxaa jira fikrado joogto ah iyo fikrado cusub oo soo saaraya si aad u duubto madaxaaga agagaarka.
Waxaa jira habab kala duwan oo lagu dabaqi karo xirfadlaha xirfad-yaqaannimada, si kastaba ha ahaatee waxaan leenahay hab muhiim ah oo kaa caawin kara sheekadaada guulo la taaban karo. Waxaan soo saarnay afar cirif oo fudud oo aad bilaabi kartid hadda inaad dhisato xirfadahaaga iyo isbeddelka mihnad awood-galiye ah.
Inad maskaxda ku hayso bartilmaameedka dhamaystiran si aad uhesho caddayn karti leh, waa inaad aqoon u leedahay nidaamyada kala duwan ee IT, oo ka bilaabmaya hay'ad sunta ah. Qalab aasaasi ah kama codsan doono wax badan, hase yeeshee markaad ka shaqeysid qaab-dhismeed wacyigalineed oo sii kordhaya, arrimuhu waxay ku soo bixi doonaan jahwareer. Waxaad doorbidi laheyd inaadan la dagaallamin si aad u xasuusato qarashka Linux, ama sida loo xalliyo server-yada Windows aan lahayn. Maalgelinta tamarta ee kudaha maamulaha ayaa si aad ah u faa'iideysan doona.
Networking, gaar ahaan, sidoo kale heli kartaa furry. Your CompTIA Network + tababarka ayaa kugula talin doona in deegaan farsamo oo si fiican loo soo dhejiyey uu leeyahay dhowr ah VLANs iyo subnets si ay u qaybiyaan, shabakad maamul ah oo loogu talagalay martigalintaada jireed, iyo shabakad karti ah oo aad kaga hadashid kaydka la wadaago, iyo sidoo kale shabakadaha kala duwan ee xafiisyo farsamo sida looga baahan yahay amniga. Fursada aan ka baxsanayno wadahadalka VLANS, waxaad leedahay dhowr dekedood oo ah adeegyad kasta ee shabakad kasta, dhammaantood waa in si sax ah loo qorsheeyaa labada aqal iyo furaha, ama waraaqaha ma dhicin.
Waqtigaas wax walbo ayuu hoos u dhacayaa 3 iyo sidoo kale khadadkaas, waxaad si fiican u heysataa xirfado xoogan oo ah shabakad.
Ma la socdaa server-ka horey loo sii daayay? Qadarin! Dilly dally iyo xoqo foomka bilaash ah ee VMware ama Microsoft Hyper-V.
Sidee baad wax u weydiisataa? Ma naqaano. Taga oo macno u yeelo.
Dumarka, waxaad tahay asxaha IT / gabadha, waxaad ku nooshahay tinker iyo macno cusub oo cusub! Intaas waxaa sii dheer, waxay qaadan doontaa toddobo maalmood oo ah qoraallada blogka si buuxda loogu daboolo. Dhibaatooyinka iyo argagixisada ayaa ku dhufan doona, sidaa daraadeed habka ugu muhiimsan ee aad u baran doonto oo aad uga tegi doonto akrigaaga ayaa ah in la jajabiyo.
Markaad dhammaysato, waxaad yeelan doontaa sanduuqa sanduuqa ah ee aad ka ciyaari karto. In la soo saaro server-ka Windows, samee xakameyn jimicsi, oo ay ku jiraan server IIS ee sawirada eyda xafiisyada, ku dar sanduuqa Linux, iyo soo saar codsi syslog ama wax kasta oo cusub oo aad u baahan tahay inaad la ciyaarto. Si fudud ha u dhigin wax kasta oo lagu aqoonsaday shabakada abuurista. Maskaxda ku hay, kani waa mashquul, 12-sano jir ah oo leh laba goobood oo khafiif ah iyo nooc ka mid ah nabdoonaanta reboots aan kala go'a lahayn.
Waxaannu hore u sheegnay VMware iyo Hyper-V hore. Labadaba waa miisaaniyaal, lakabka wax soo saarka ee runtii ku dhejinaya mulkiilaha gurigaaga, RAM, iyo awoodda aad u leedahay mishiinnada farsamooyinka si loo isticmaalo hantidaas. Inkasta oo ay jiraan noocyo badan oo isku-dhafan oo la heli karo, labada ugu caansan waa VSware's vSphere iyo Microsoft Hyper-V.
Labada labadoodba aad ayay u kobciyaan alaabooyinka, oo ay wadajir u leeyihiin, ugu badnaan qaybo ka mid ah warshadaha guud. Labada waxbarasho ee mudnaanta leh, weli waa inaad wakiil ka noqotaa awood aad u saraysa marxalad. Dhanka khadka aadka u shaqeyneyso dukaanka Microsoft, Hyper-V waa go'aan aan la dafiri karin, gaar ahaan marka la eego heerka uu ku yimid qaabka kasta ee Windows Server tan iyo 2008. Fursad ka baxsan in aad haysatid server-yo Linux ah ama aad xiiseyneyso waxyaabo kale oo aan Microsoft ahayn ka dibna fiiri vSphere.
Si kastaba ha noqotee, CBT Nuggets ayaa kuu xaqiijiyey dhamaanba baahiyaha tababarka. Microsoft wuxuu daboolayaa Hyper-V dhamaanteeda ku-sheegidda astaanta MCSA iyo MCSE, iyo VMware's VCP-DCV waa aqoonsi qoto dheer ee vSphere.
Waxaad heshay xirfadaha, marxaladda, iyo xadhkaha, sidaa daraadeed waxaad ku fiicantahay habka aad u leexatey farriinta farshaxanka. Markaad ka soo baxdo qaab-dhismeedkaaga qaab-dhismeedka ah, qaybta ugu muhiimsan ee qalab-kororsigaaga isticmaalkiisa ayaa noqon doona mid sareeya. Tani waxay tixgelineysaa barnaamijka ka gaabinta mashiinada farsamooyinka oo ka bilaabma hal qol marti ah ka dibna marka xigta marka la joojiyo.
Waxaa jira qiimo ku filan kharashka si kastaba ha ahaatee, waxayna ku bilaabataa qalab aan dhammeystirnayn. Kharashka dheeraadka ah, si cad, waxay qeexaysaa wax iibsi intaa ka badan oo laga rabo kor u kaca. Waqtigan xaadirka ah, waa inaad aqoon u leedahay ilaalinta horumarinta iyo sida loo yareeyo kharashyada iyo dhimista, labadaba niyadjabka niyadda iyo aasaasida asaasiga ah.
Dhaqan-galinta ayaa isbedelay mar walba, waxaana suurtagal ah inay xirfaddaada ku caawiso asaas ahaan. Haddii aanad ahayn sidii wax looga qaban lahaa jawi farsamo, waxay kugu xiran tahay inaad bilowdo oo aad maalgashato dadaalka iyo maaraynta socodsiinta, maaddaama kuwani ay yihiin xirfado u muuqda in ay yihiin heerka caadiga ah ee dhammaan khibradaha IT.